Somalia: Raysal Wasaare Khayre Oo Ka Qayb Galay Kulan Dhexmaray Shaqaalaha Rayidka ah iyo Madaxda Dawladda Soomaaliya | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Somalia: Raysal Wasaare Khayre Oo Ka Qayb Galay Kulan Dhexmaray Shaqaalaha Rayidka ah iyo Madaxda Dawladda Soomaaliya
Raysal Wasaaraha xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre, ayaa maanta ka qeyb galay munaasabad loogu magac daray kulanka madaxda sare ee dawladda iyo shaqaalaha rayidka ah ee dawladda.
Munaasibadaas oo lagu soo bandhigayay wax-qabadka shaqaalaha iyo wada shaqaynta ka dhaxaysa madaxdooda, sidoo kalena waxaa looga hadlayay xaquuqda ay leeyihiin shaqaalaha. Waxaana munaasabadda goob-joog ahaa wasiirro ka tirsan xukuumadda iyo shaqaalaha dawladda.
Raysal wasaare Khayre, ayaa tilmaamay in uu ku faraxsan yahay ka qeyb galka kulan-kan muhiimka ah, waxaanu ku dhaaraaday dhibaatadii iyo daruufahii adkaa ee lagu soo shaqeeyay, iyadoo aysan horey u heli jirin shaqaaluhu xaquuq joogta ah.
Waxaan ognahay inaad dalkaan ugu soo shaqeyseen duruufo adag, iyadoo aan la mari karin jidadka amni xumo awgeed, waxaan dareen sanahay qaar kiin inaad soo shaqeyseen iyadoo laga faano dawladda, balse ugu dambeyn waxaad soo gaarteen inaad shaqaysaan, idinkoo ku faanaya shaqada aad qarankiina u haysaan ayuu yidhi raysal wasaaruhu.
Isagoo hadalkiisa sii watayna waxa uu yidhi Hadii aan rabno inaan dhibka ka baxno waa in la helaa shaqaale ku faana shaqadooda, bulsho kastana sida ay uga shaqo badan tahay tan kale ayaa lagu qiimeeyaa, taasina waa xaqiiqo ka jirta caalamka oo dhan.
Xasan Cali Khayre, ayaa xusay in dalka Soomaaliya uu qaaday jidkii horumarka, taasina ay keentay in ay dib-u-soo noqoto sharaftii Soomaaliya ku lahayd adduunka.
Waxaanu faray in qof walba looga baahan yahay in uu ka soo hor-jeesto musuq-maasuqa, si loo helo sinnaan iyo caddalad, dalkuna u gaaro horumarka uu higsanayo. Haddii aan ku guuleysanay in aan bixinno mushaarka shaqaalaha mudadii aan xafiiska joognay, waa in qof walba ogaadaa in bil walba heli doono xuquuqdiisa, isna laga rabo shaqo dheeraad ah ayuu yidhi raiisul wasaare Khayre.